200HC chena ＞ 96 60 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 AIHWA AIHWA 0.25
400HC chena ＞ 96 45 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 AIHWA AIHWA 0.22
600HC chena ＞ 96 25 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 AIHWA AIHWA 0.15
1250HC chena ＞ 96 15 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 AIHWA AIHWA 0.12
Iko Kubasa Kwakanyanya Kwekugadzira Mica
Synthetic mica upfu inogona zvakare kushandiswa sechiwedzero mupurasitiki yekugadzira zvigadzirwa kuti zviite zvemainjiniya mapurasitiki ane simba rakakura, kusimba kwakanaka uye kurema kurema. Inogona kuwedzera kuomarara, kudzikisira kupisa, kudzikamisa kuenzana kwekuwedzera kwekushisa, kuderedza kusakara uye asidhi uye alkali kuramba kwezvikamu. Ndiyo inonyanya kukwikwidza polymer, iyo inogona kushandiswa mumotokari, ndege, indasitiri yekudzivirira yenyika uye mamwe masango akakosha, uye inogona kutsiva zvigadzirwa zvesimbi.
Synthetic mica is hydrophilic non-metallic material, saka ine kusagadzikana kuenderana neakawanda manyowa substrates, ayo anokanganisa zvakananga kunaka uye mashandiro ezvinoenderana zvigadzirwa. Naizvozvo, zvinowanzo fanirwa kugadzirisa pamusoro peyakagadzirwa mica.
Zvinoenderana neakasiyana modifera, iyo yekumusoro nadzurudzo yeyakagadzirwa mica upfu inogona kukamurwa kuva organic pamusoro shanduko uye inorganic pamusoro shanduko. Sekusimbisa mafillers, synthetic mica powder yakashandurwa ne organic surface inonyanya kushandiswa muzvinhu zvepolymer zvakadai se polyolefin, polyamide uye polyester, kuitira kuti ivandudze kuenderana kwayo nepolymer matrix uye nekuvandudza mashandiro ayo. inowanzoshandiswa coupling vamiririri, silicone mafuta uye mamwe makemikari modifiers. Iyo yekugadzira mica poda yakagadziridzwa neye inorganic pamusoro inowanzoshandiswa mumunda weparelescent pigments, chinangwa ndechekupa iyo yekugadzira mica upfu yakanaka yekuona uye yekuona mhedzisiro, ita kuti chigadzirwa chiwedzere kuve chinoyevedza uye chakashongedzwa, kuitira kusimudzira mashandiro anoita mica upfu. Titanium oxide uye munyu wayo zvinowanzo shandiswa se modifiers.
Pashure: Phlogopite mica upfu
Zvadaro: Wet pasi pasi mica upfu